Ahoana no fomba hanjerako ny findaiko finday Windows 10? - Faq
Tena > Faq > Alaharo ny touchpad laptop - ahoana no hamahana
Alaharo ny touchpad laptop - ahoana no hamahana
Ahoana no fomba hanjerako ny findaiko finday Windows 10?
hiraam-baravarankely+ I hanokatra ny fampiharana Fampiharana. Ao amin'ny pejy voalohany, kitiho ny sokajy 'Fitaovana'. Ao amin'ny pejy Fitaovana, safidio ny “Touchpad”Sokajy eo ankavia. Eo ankavanana, mikorisa kely avy eo ary kitiho ny bokotra 'Reset' eo ambanin'ny 'Reset YourTouchpad' faritra.13 Sep 2018
Ity lahatsoratra ity dia mampiseho ny fomba hamahana ny olana amin'ny TouchPad ao amin'ny kahie HP anao amin'ny Windows 10.
Ny TouchPad dia faritra mora tohina amin'ny ClickPad an'ny kahie HP sasany. Araho ireto dingana ireto raha tsy mandeha ny TouchPad anao. Vonoy aloha ny TouchPad ary avereno indray.
Kitiho indroa ny zoro ambony havia amin'ny TouchPad hamonoana azy ary hamerina ny fizotrany hamerenana azy indray. Ny famerenana mafy dia mety hamaha ny olana amin'ny TouchPad. Vonoy aloha ny kahie ary esory ny kahie avy eo amin'ny toby fiantsonan'ny fitaovana.
Atsaharo ny fitaovana ivelany rehetra. Atsaharo ny elanelam-pahefana avy amin'ny kahie. Esory ny bateria avy ao amin'ny efitry ny bateria.
Tsindrio ary tazomy ny bokotra On / Off 15 Segondra mba hamoahana tanteraka ny bateria, ary avereno ao anaty kahie ilay bateria. Avy eo atsofohy ny adaptatera AC. Tsindrio ny bokotra Power mba handrehitra ilay kahie.
Raha misokatra ny menio Start dia safidio ny Start Windows araka ny tokony ho izy ary avy eo tsindrio Enter. Mampifandray indray ireo fitaovana ivelany ary mampandeha Windows Update sy HP Support Assistant avy amin'ny Internet hanavao ireo mpamily. Hamarino tsara fa manana mpamily farany indrindra momba ny TouchPad ianao.
Mandehana any amin'ny support.hp.com.
Kitiho ny lozisialy sy ny mpamily. Ampidiro Ampidiro ny nomeraonao, ary kitiho ny Find my vokatra. Ho hitan'ny HP ho azy izay kahie ampiasainao.
Safidio ny rafi-piasanao amin'ny menio mitete. Kitiho ny Drivers - Fitaovana fitendry, totozy ary fampidirana ary avy eo tsindrio ny Fampidinana eo akaikin'ny TouchPad Driver. Sokafy ny fampirimana fampidinana ary kitiho indroa hametrahana ny mpamily farany.
Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hamita ny fametrahana. Azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny fikirakirana rindrambaiko teo aloha raha toa ka mandeha tsara ny TouchPad. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny famerenana amin'ny laoniny ny kinova taloha, tsidiho ny support.hp.com.
Raha tsy mandeha ny TouchPad Mametraka rindrambaiko sy mpamily fitaovana havaozina ho an'ny kahie. Ampidiro ny fikirana ao amin'ny bara fikarohana, avy eo kitiho ny setting. Kitiho ny fanavaozana & fiarovana.
Tsindrio Jereo raha misy fanavaozana. Windows Update dia hijery ireo fanavaozam-baovao avy eo ho tonga Fanavaozana aseho ary apetraka ho azy. Atsaharo ny kahieo.
Afaka mahita lahatsoratra mahasoa kokoa ianao ao amin'ny hp.com/SupportVideo ary ao amin'ny fantsona YouTube youtube.com/HowTo4U.
Ahoana no fomba hanamboarako ny touchpad misavoritaka?
Amboary ny fikiranao
Mandehana mankany amin'ny setting> Fitaovana>Touchpadary ovao nytouchpadfahatsapana fahatsapana. Ho fanampin'izay, mety te-hamono ireo fampisehoana paompy-na-tsindrio ianao, na ilay fiasa zorony ambany ankavanana izay azo alain-tahaka.
Raha tsy mandeha na tsy manao fomba hafahafa ny touchpad-nao, misy zavatra vitsivitsy azonao atao mba hamerenana azy io ho ara-dalàna Hamafiso raha azo ampandehanan'ny bokotra fiasa ny touchpad Tsindrio ary tazomy ny lakilen'ny f7 sy ny f7 fanalahidy arakaraka amin'ny maodelin'ny solosainao dia ahitanao ny hitsin-dàlana trackpad ao amin'ny menio f1 ao amin'ny bokotra f12, na izany aza tsy ny solosaina Dell rehetra no manana an'io safidy io fa miasa ny touchpad anao izao raha tsy miroso amin'ny dingana manaraka izy. vaovao ny PC anao, rehefa miseho ny sary famantarana Dell, kitiho ny bokotra F12 hampiasa ny bokotra zana-tsipika fitendry hankanesanao any amin'ny menio boot indray mandeha Navigate to Diagnostics ary tsindrio Enter, avy eo araho ny torolàlana eo amin'ny efijery mba hamenoana ny aretina.
Raha mahazo kaody hadisoana ianao dia soraty ny kaody diso na fanamarinana ary mifandraisa amin'ny fanampiana ara-teknika an'i Dell amin'ny alàlan'ny media sosialy amin'ny Facebook na Twitter hahazoana torolalana; raha tsy nahomby ny fitsapana dia mankanesa any amin'ny dingana manaraka handroso mba hahitanao ny fandehan'ny raharaha amin'ny Safe Mode, kitiho ny menio Start ary miditra amin'ny Settings, safidio ny Update & Security, hitety ny Recovery, ary eo ambanin'ny Advanced Startup, kitiho ny Restart Ankehitriny aorian'ny famerenan'ny PC anao eo amin'ny efijery, safidio safidy iray, safidio ny troubleshooting, safidio ny Advanced options, ary avy eo safidio ny Startup Settings ary kitiho ny bokotra Restart aorian'ny famerenan'ny rafitrao Press the F4 key to Safe Safe mode Once you in Safe Mode , andramo ny touchpad-nao, raha tsy mamaly izy dia andramo ny dingana manaraka. Vaovao farany ny rafitra bioswindows Ampidino ny fanavaozana farany azo zahana amin'ny sokajy ary ampandehano ny azo tsindrio Click Update ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery mba hamita ny dingana Raha manavao ny BIOS amin'ny solosaina finday ianao dia alao antoka fa eo ny bateria ary eo ny adapter AC mifandraisa havaozy ny mpamily anao miaraka amin'ny Dell supportassistwindows ary safidio ny Support Assistant sokafy eo amin'ny kiheba 'Home' ny tile mba hahazoana mpamily sy fisintomana Tsindrio ny bokotra 'Run' asehon'ny Assistant Assistant izay fanavaozam-baovao rehetra misy. Tsindrio fotsiny ny 'Install' ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery Raha mbola manana olana amin'ny touchpad ianao dia mandehana amin'ny dingana manaraka, alefaso ny Touchpad Gestures sy Check Settings, kitiho ny menio Start ary mandehana any amin'ny Settings, misafidy Devices ary mizaha mankany amin'ny touchpad, ampanjifaina ary ampanjifa ny safidin'ny fihetsika rehetra, ary izahao toetra ny vokany amin'ny findainao.Raha mbola manana olana amin'ny touchpad anao ianao aorian'ny nahavita ireo dingana rehetra ireo dia mifandraisa amin'ny fanampiana ara-teknika an'i Dell amin'ny alàlan'ny media sosialy amin'ny Facebook na Misy toro-hevitra manampy betsaka kokoa ary misy lesona momba ny fanohanana ara-teknika an'ny Dellchannel hahazoana fanampiana bebe kokoa.
Aza hadino ny misoratra anarana raha tianao ity lahatsoratra ity
Fa maninona ny findaiko finday tsy mandeha tsara?
Raha nytouchpad tsy mandeha, mety ho vokatry ny mpamily tsy hita na lany andro. Raha tsy izany no dinganaasa, andramo esory nytouchpadmpamily: sokafy Device Manager, tsindrio havanana (na tsindrio ary tazomy) nytouchpadmpamily, ary safidio ny Uninstall. Atsaharo ny fitaovana ampiasainao ary hanandrana hametraka indray ny mpamily i Windows.
Ahoana ny fomba hanjeranao ny touchpad amin'ny totozy?
Avereno atao calibrate ny touchpad-nao. Mandehana any amin'ny faritra ampiasain'ny fitaovana 'Mouse' (ao amin'ny Control Panel) ary tadiavo ny fikirakiran'ny fitaovana. Tokony hisy fampiasa 'Advanced Settings' na 'Calibration' eo ambanin'ity tabilao ity. Araho ny bitsika handrindrana ny touchpad-nao mba hahombiazana faran'izay betsaka. Mampiasà mpamosavy amin'ny famahana olana.
Inona no fomba tsara indrindra handaminana indray ny touchpad?
Famerenana amin'ny laoniny. Mba hanerena ny famerenana amin'ny laoniny ny tontolon'ny touchpad dia ataonao izay antsoinay hoe fiarahabana amin'ny rantsana efatra. Tsindrio ny bokotra efatra rehetra eo an-joron'ny fitendry amin'ny fotoana iray, kitiho farany ny bokotra 'fn', ary apetaho eo amin'ny touchpad ny rantsan-tànanao.
Ahoana no fomba hanjerako ny trackpad-ko?
Mandehana any amin'ny faritra ampiasain'ny fitaovana 'Mouse' (ao amin'nyTakelaka fikirakirana) ary tadiavo ny fikirakiran'ny fitaovana. Tokony hisy'Fikirana mandroso'na fampiasana 'Calibration' eo ambanin'ity kiheba ity. Araho ny bitsika handrindrana ny touchpad-nao mba hahombiazana faran'izay betsaka.
Ahoana no fanitsiana ny fahatsapana ny pad pad?
Mandehana any amin'ny Settings na Advanced (miankina amin'ny kinova rindrambaiko) aseho etsy ambany. b. Miseho ny efijery mipoitra iray. d. Mandehana any amin'ny tabilao mandroso ary kitiho ny kiheba Motion. d. Mandehana amin'ny Touch Activation Threshold ary amboary ny slider mba hifehezana ny fahatsapana. e. Tsindrio OK raha misy vokany ny fanovana.